Ekoatora: Ny Fahasorenan’ny Mpanoratra · Global Voices teny Malagasy
Ekoatora: Ny Fahasorenan'ny Mpanoratra
Nandika (fr) i Isabelle Poiroud
Voadika ny 20 Mey 2017 8:49 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Septambra 2009)
Mbola be rano hikoriana mandra-pahitan'i Ekoatora mpanoratra iray hanana ny talenta mitovy amin'i Jorge Adoum. Fa na ahoana na ahoana, velona sy matanjaka tsara ao Ekoatora ny kolontsaina tia vaky boky, vao mainka aza velombelomin'ny vondrona tanora mpanoratra izay miezaka ny hametraka ny anarany ao anatin'ny literatiora ekoatoriana. Indrindra fa midika fahasorenana mitambesatra ny maha-mpanoratra ao amin'ity firenena ity. Fiatrehana ireo mpanoratra efa fantadaza erantany, fa koa ny fahitàna ny asan'ny tena nahodinkodin'ireo politisiana. Na izany aza, mametraka fanantenana amin'ny fireneny ny ankamaroan'ireny mpanoratra ireny ary tsy mitady afa-tsy ny hanolotra ny asany amin'ireo mpamaky azy ireo.
Sarinà foaram-boky natao tao Buenos Aires, Arzantina, avy amin'i Raúl Farias, fampiasàna nahazoana alàlana.
Iray tamin'ireo mpamaky azy, Raúl Farias ao amin'ny bilaogy Al Lado del Camino [amin'ny teny Espaniola, toy ireo rohy rehetra ato anaty lahatsoratra] no efa nitety izao tontolo izao sy nitsidika toerana maro misy ireo mpamaky afaka misafidy boky marobe. Any amin'ireny tanàna ireny, mitàna toerana lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona tokoa ny vaky boky. Saingy ao an-tanànany, ao Guayaquil, izay mety hahatratra 30° ny maripàna, miaraka amin'ny tahan-kamandoana avo be, tsy misy làlana voafaritra mba hividianana boky. Saingy ahitàna kosa toerana hafa azo atao ho “solony” , ohatra :
Toeram-pivarotana eny amin'ny kihon-dàlana (ambanin'ireo jiromena, eo ampivoahana indrindra ny toerana fandraisana fiara fitaterana, any amin'ireo toerana voadio toy ny farmasia na ireo toeram-pivarotana lehibe (fanampin'ireo toerana roa lehibe fivarotana boky any anatin'ireo toeram-pivarotana goavana, satria ireo farany any afovoan-tanàna dia mitovy kokoa aminà magazay fivarotana fitaovana fianarana), any afovoan'ireo fanjaitra fanindronana, tatinjaza, voankazo, saosisy na koa vokatra vao notazana.
Saingy any amin'ny karazana toerana toy izany, tsy nahitàn'i Raul Farias bokin'ireo mpanortra efa fantadaza erantany toa an'i Paulo Coelho. Tsy dia hita loatra koa ireo ekoatoriana mpanoratra.
Tsy olana izay toerana ahafahana mividy boky, mijanona mandrakariva ho zavatra manana ny lanjany ao anatin'ny fiarahamonina ekoatoriana izy ireny. Mpanoratra iray hafa, Eduardo Varas, no manoratra ao amin'ny bilaoginy Libros, Autores y Riesgos hoe noho ny fahalinana ateraky ny literatiora sy ny lazany, mahita fotoana hanararaotana azy foana ireo manampahefana mba hamiliana ny hetsika ho amin'ny tanjona politika. Ohatra, nandritra ny famoahana ny bokin'i Andrés Neuman El Viajero del Siglo (Ilay Mpivenjin'ny Taonjato), natao tao Quito, Nambaran'ireo manampahefana avy ao amin'ny ministeran'ny kolontsaina ekoatoriana fa nisy fifandrasainy teo amin'ilay boky sy ny “revolisionan'ny olompirenena” nataon'ny governemanta. Manontany tena i Eduardo Varas momba izay antony tsy hamelàn'izy ireo ny literatiora hilamina amin'ny misy azy.
Inona no olan-dry zareo e ? Tsapa mazava fa tokony hanefa ny andraikiny ireo izay mitondra antsika, na mipetraka any aminà toerana iray manokana natao ho an'ireo asam-bahoaka (fa tsy asam-panjakana) satria ry zareo mihevitra ny vahoaka izay tonga manatrika ireny hetsika ireny ho toy ny andian'ondry adala afaka manaiky tsy misy fimonomononana ny rehetra aroso azy. Tena mihoatra noho izay takatry ny saina ilay fotokevitra. Toy ny tsy nisy ireo tehaka natao ho an'i Salazar (minisitra lefitra misahana ny kolontsaina. Miala tsiny aho raha mivantambantana, tsy mihevitra ny hanafintohina olona aho, na iza na iza, fa tsy misy ratsy noho ny fahatsapàna fa heverina ho toy ny adala isika.
Mahatsapa fahasorenana be ihany koa ireo mpanoratra rehefa mahita ny asany anaovan'ny sasany hosoka sy amidy eny an'arabe. Efa niteraka tsy an'asa 15.000 ary fatiantoka 66 tapitrisa dolara ny fanaovana hosoka ao Ekoatora. Saingy tsy mbola fantatra foana ny isanjato tamin'io vola io noharonina mivantana avy any ampaosin'ireo mpanoratra. Kanefa, mpanoratra iray hafa, Rafael Méndez Meneses, no tsy miasa saina amin'io voalaza io. Tiany fotsiny ny asany ho azon'ireo rehetra mpamaky azy jifaina, ary mahavita miteny mihitsy aza hoe :
Amin'ny andro iray izay hisian'ny rafotsibe entina hotsaraina eny amin'ny fitsarana satria nanao hosoka ny asako sy nanaparitaka izany, na noho ny famoahana ny tononkaloko tao amin'ny bilaoginy, handoro tena aho!